We.com.mm - မက်မွန်သီးကိုအသုံးပြုထားတဲ့ စားချင်စဖွယ်အချိုပွဲ (၄) မျိုး
မက်မွန်သီးကိုအသုံးပြုထားတဲ့ စားချင်စဖွယ်အချိုပွဲ (၄) မျိုး
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင် မက်မွန်သီးကိုသာ အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အချိုပွဲ (၄) မျိုး လုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲပြီး လေ့လာကြည့်ရအောင်..။
1. Peach Pie Boat
မုန့်နှစ်လုပ်တဲ့အသား pie crust ကိုယူပြီး ပုံစံခွက်လေးဖြစ်သွားအောင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ မုန့်ဖုတ်စက်ထဲမှာ (၃၅၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထားပြီး၊ (၁၅) မိနစ်ထည့်ထားပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်စက်ထဲကထုတ်တာနဲ့ ခွက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီထဲကို အတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးထားတဲ့ မက်မွန်သီးတွေ ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ အပေါ်မှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ခရင်မ် (သို့) ရေခဲမုန့်ကို တင်ပြီး အပေါ်ကနေမှ ပျားရည်လေးဆမ်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Peach Pie Boat လေးကို ရရှိပါပြီ။
2. Fanned Peach Tart
မက်မွန်သီးအလုံးကြီးတစ်လုံးကို နှစ်ခြမ်းခြမ်းပြီး ဓားနဲ့လှီးကာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ puff pastry ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အရွယ်လောက်လှီးပြီး၊ အပေါ်ကနေ apricot jelly လေးတွေသုတ်ပေးပါ။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှ လှီးထားတဲ့မက်မွန်သီးကို တင်ပေးရပါမယ်။
အားလုံးပြီးရင် ဘေးနားလေးတွေကိုခေါက်ပြီး၊ မုန့်ဖုတ်စက်ထဲမှာ (၃၅၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထားပြီး၊ (၁၅) မိနစ်ထည့်ထားပေးပါ။
မုန်ဖုတ်စက်ထဲကထုတ်တာနဲ့ Fanned Peach Tart လေးကို ရရှိပါပြီ။
3. Half Peach Crumble
အရင်ဆုံး မက်မွန်သီးအကြီးတစ်လုံးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ခဏပေါင်းထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပန်းကန်လုံးထဲကို ထောပတ်၊ သကြားအညို၊ ဂျုံမုန့်နဲ့ Oatmeal ရှိရင် Oatmeal ပါထည့်ပြီး နယ်ပေးပါ။
ပြီးတာနဲ့ မက်မွန်သီးအပေါ်မှာ တင်ပေးပြီး၊ မုန့်ဖုတ်စက်ထဲမှာ (၃၅၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထားပြီး၊ (၁၂) မိနစ်ထည့်ထားပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်စက်ထဲကထုတ်တာနဲ့ အပေါ်မှာ ရေခဲမုန့်လေးတင်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါဆိုရင်တော့ Half Peach Crumble ကို ရရှိပါပြီ။
4. Peaches Cream Milkshake
ရေခဲကတ်လေးထဲကို Vanilla Cream လေးတွေထည့်ပြီး၊ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အေးခဲသွားတဲ့အထိ ထည့်ထားပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Blender ထဲကို အတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးထားတဲ့ မက်မွန်သီးတစ်ပန်းကန်နဲ့ ပျားရည်အနည်းငယ်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ခုနကအအေးခံထားတဲ့ Vanilla Cream အတုံးလေးတွေကို ထည့်ပြီး၊ မွှေပေးရပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး၊ အပေါ်ကနေ ခရင်မ်လေးတင်ပေးကာ မက်မွန်သီးလေးနဲ့ အလှဆင်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Peaches Cream Milkshake ကို ရရှိပါပြီ။
အိပ်ခါနီးမှာ မစားသင့်တဲ့ အစားအသောက် (၄) မျိုး
ထင်သလောက်မခက်ခဲပဲ အရသာရှိတဲ့ ဂင်ချီစတူးချက်နည်း
သင့်ရဲ့ လက်သီးဆုပ်ပုံက အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ပြောပြနေပါတယ်
ဘယ်တော့မှ မသေနိုင်တဲ့ သတ္တဝါ (၅) မျိုး
ပရိသတ်တွေကို ဆုချီးမြင့်မယ့် နေတိုး နဲ့ မိုးဟေကို တို့ရဲ့ အခွီ Tik Tok Challenge